परिवारसँग बस्ने त टाढाको कुरा जसले आफ्नै भूमिमा आएर मर्न पनि पाएनन् !
स्याङ्जाको हरिनास गाउँपालिका– २ चिसापानीका ३२ वर्षीय देवबहादुर थापाको नेपाल फर्किने क्रममा भारतको नौतनवामा जेठ १० गते निधन भयो ।
कोभिड– १९ का कारण भारतमा रोजगारी गुमेपछि नेपाल आउन खोज्दा दुवै देशमा ‘लकडाउन’ चलिरहेको थियो ।
उनी हिँडेरै नेपाल आउने प्रयासमा थिए, तर सीमा बन्द भएकाले नेपाल प्रवेश पाएनन् । उनलाई सीमापारि नै नौतनवास्थित राजीव गान्धी पीजी कलेजको क्यारेन्टाइनमा राखियो ।
बाँचे आफ्नो परिवारसँगै बस्ने, मरेपनि आफ्नै देशमा मर्ने संकल्प गरेर यात्रा तय गरेका उनको क्वारेन्टाइनमै मृत्यु भयो । श्वास छँदा नेपाल टेक्न पनि पाएनन् ।
मृत्युपछि कोभिड– १९ परीक्षणको नतिजा आयो, नेगेटिभ । कोभिड पुष्टि नभएपछि शव परिवारको जिम्मा लगाइयो । परिवारका सदस्यले गाउँमै लगेर अन्तिम संस्कार गरे ।
अर्कैका देशमा क्वारेन्टाइनमा बिरामी हुँदा पनि उपचार नपाएर मृत्यु भएको आमा देवीमाया बताउँछिन् ।
उनले रुँदै भनिन्, ‘कतारमा ४ वर्ष बसेर गएको मंसिरमा छोरो घरमा आएको थियो, त्यसपछि माघमा भारतको अलिगढ गएको थियो ।
यो महामारीले काम गुमेपछि घर आएर तरकारी खेती गर्ने सोच छ भन्दै थियो, तर घर आइपुग्नै पाएन ।’ देवबहादुरका दुई छोरी छन् । अब उनीहरूको पनि बिचल्ली भएको छ ।
भारतको गुजरातबाट कपिलवस्तुको कृष्णनगर नाका हुँदै घर फर्किने क्रममा अर्घाखाँचीको भूमिकास्थान नगरपालिका– ९ का अर्का एक युवाले पनि ज्यान गुमाए । नेपाल आइनपुग्दै बाटोमै उनको ज्यान गयो ।
जेठ १० गते गाडीमा छट्पटिएका उनले बान्ता गरे । स्वावप्रश्वासमा समस्या भएर गाडीमै ढले, त्यहीँ उनको मृत्यु भयो ।
शव कृष्णनगर ल्याएर स्वाब परीक्षण गर्दा कोभिड– १९ पोजेटिभ देखियो, जसको पुष्टि स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटा तथा कपिलवस्तुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घनारायण पौडेल दुवैले गरिसकेका छन् ।
महाव्याधिका कारण पराया देशमा रोजगारी गुमाएपछि उनी पनि नेपालमै आएर केही गर्न चाहन्थे, तर सम्भव भएन ।
‘भाइ अब देशमै परिवारसँग बसेर केही गर्ने सोचका साथ गाउँ फर्किँदै थियो, तर कोरोनाले बाटोमै चुडेर लग्यो,’ उनका दाजुले लोकान्तरसँग गुनासो गरे ।
अधिकांशले कोरोनालाई जितिरहेका बेला आफ्नो भाइलाई त्यस्तो के भयो भन्नेमा उनी अन्योलमा छन् ।
‘भाइ होटलमा काम गर्थ्यो । गाउँका ७० जना मिलेर गाडी रिजर्भ गरेर आएका थिए । भाइ कुनै दीर्घरोगी पनि थिएन । कोरोना लागेका कमैको मात्र मृत्यु भइरहेकोछ, तर मेरो भाइलाई के भयो त्यस्तो ?’ उनले अन्योलता व्यक्त गरे ।
उनको नेपालस्थित सीमामा प्रवेश नगर्दै मृत्यु भएको कपिलवस्तुका प्रजिअ पौडेल बताउँछन् ।
‘नेपाल प्रवेश नगर्दै निधन भएको थियो । उनको शवलाई सुरक्षित रुपमा नै गाउँमा पठाइएको हो । स्वाब जाँचको रिपोर्ट पोजेटिभ देखियो ।’
पछिल्लो समय सीमामा आइपुगेकाहरूलाई धेरै दिन नरोकिएको र सम्बन्धित पालिकाम पठाउँदै आएको उनले बताए ।
भारतको मुम्बइबाट गाउँ आएका बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिका २५ वर्षिया युवाको जेठ ४ गते क्वारेन्टाइनमै मृत्यु भयो । दुईसाताको यात्रा गर्दै लुकिछिपी गाउँ आइपुगेका उनलाई क्वारेन्टाइनमै रहेको अवस्थामा एक्कासि ज्वरो आयो । बान्ता भयो । स्वासप्रश्वासमा समस्या भयो । उनलाई अस्पताल पुर्‍याउन एम्बुलेन्स खोज्दा खोज्दै मृत्यु भयो ।
समयमै उपचार नपाउँदा ती युवाले ज्यान गुमाउन पुगेको नरैनापुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष ईश्तियाक अहमद साह बताउँछन् । ‘धेरै एम्बुलेन्सलाई फोन गर्दा क्वारेन्टाइनमा रहेकालाई बोक्न डराए । अस्पताल पुर्‍याउन नसक्दा नै उनको हुन पुग्यो,’ अध्यक्ष साहले भने ।
नरैनापुर देशकै सबैभन्दा बढी कोरोना संक्रमित भएको स्थानीय तह हो । त्यहाँ १ सयभन्दा बढी कोरोना संक्रमित छन् ।
भारतमा रोजगारीका लागि पुगेका नेपाली अहिले धमाधम घर फर्किरहेका छन् । उनीहरू कहीँ गाडी, कहीँ पैदल यात्रा गरेर सीमासम्म आउँदा बिरामी पर्न थालेका छन् । सीमामा आइपुगेपनि खान र बस्न नपाउँदा बिरामी पर्न थालेका छन् ।
समयमै आफ्नो भूमिमा प्रवेश नपाउँदा सीमापारि नै मृत्यु हुन थालेको छ ।
प्युठानको ऐरावती गाउँपालिका– ६ की २६ वर्षिया महिलाको मंगलबार क्वारेन्टाइनमै मृत्यु भयो । भारतको लुधियानाबाट जेठ ८ गते उनी प्युठान आएकी थिइन् । यद्यपि उनमा कोभिड– १९ संक्रमण देखिएन ।
पछिल्लो समय भारतबाट आउँदा बिरामी हुनेले समयमै उपचार पाउन सकेका छैनन् ।
शनिबार गुल्मी छत्रकोट गाउँपालिका वडानम्बर–४ दिगामस्थित आदर्श माविको क्वारेन्टाइनमा बसेका ५६ वर्षीय चन्द्रबहादुर परियारले आत्महत्या गरेका छन् । उनको आत्महत्याको कारण खुल्न सकेको छैन ।
बिरामी भएर सीमासम्म आइपुगेकाहरूलाई सुरक्षित रूपमा नेपाल प्रवेश गराई क्वारेन्टाइनमा राखिने जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रुपन्देहीका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) खड्गबहादुर खत्री ताउँछन् ।
‘अहिलेसम्म सीमा आएकाले हामीलाई बिरामी भएको जानकारी गराउनुभएको छैन । जानकारी गराए हामीले उहाँहरूलाई प्राथामिकता दिन्छौं । उपचारका लागि भारत गएर सीमासम्म एम्बुलेन्समा आएकालाई प्रवेशमा रोक लगाइँदैन । सीमा कोही बिरामी परेर परिवारले एम्बुलेन्स लाई लैजान चाहे लैजान सक्छन्,’ उनले भने ।
पछिल्लो एक हप्तामा प्रदेश नम्बर पाँचका विभिन्न नाकाबाट झण्डै ३५ हजार नेपाल प्रवेश गरेका छन्, जसले गर्दा प्रदेशका सबै गाउँपालिकाले निर्माण गरेका क्वारेन्टाइन भरिभराउ छन् । प्रदेश पाँचमा मात्रै ३३ हजार मानिस क्वारेन्टाइनमा छन् । प्रदेश ३ सय ८३ जना उपचाररत छन् । निको भएर घर फर्किनेको संख्या ४७ छ ।
परीक्षणको दर घट्दा लगातार दोस्रो दिन सयभन्दा कम भेट...
प्रचण्डको प्रश्न– स्थायी कमिटीबाट नक्सा प्रकाशित गर्ने ...